Raysul Wasaare Cabdi Weli oo culimada ka dalbaday iney dowladda gacansiiyaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raysul Wasaare Cabdi Weli oo culimada ka dalbaday iney dowladda gacansiiyaan
A warsame 16 March 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Shiikh Axmed Maxamed oo kulan hoygiisa kula yeeshay culimada Soomaaliyeed, ayaa ku dhiirrigeliyey hoggaamiyayaasha diinta iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed in ay gacan ku siiyaan dowladda halganka iyo dagaalka ay kula jirto Alshabaab oo uu sheegay iney yihiin koox xanbaarsan fikir takfiiriga ah.
Kulankan oo ay sidoo kale goob-joog ka ahaayeen xubno ka mid ah Golaha Wasiiradda ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ayaa labada dhinac isku weydaarsadeen sida ugu habboon ee culimada diinta iyo dowladdu iskaga kaashan karaan la dagaalanka fikirka Alshabaab oo lagu tilmaamay mid gurracan.
“Ujeedada kulankan waxa weeye in culimada diinta maaddaama ay meel sare kaga jiraan bulshada ay dadaalkooda ku biiriyaan halgankan dalka lagaga xoreynayo kooxaha nabad-diidka ah. Waa in aynu u midownaa dagaalkan oo laga wada qaybgalo, waxana muhiim ah in culimadu ay qaataan kaalintooda oo ah mid hoggaamineed” Sidaasi ayuu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ka sheegay kulanka.
“Kooxda Al-shabaab waa koox luntay oo baadi ah, kamana turjumaan micnaha, ujeedooyinka iyo qiyamka sarreeya ee diinta Islaamka, waxa ay dadka ku bartilmaameedsanayaan goobaha cibaadada iyagoo aan cidna u aabbayeelayn. Dowladda Soomaaliya waxa ay dadaalkeeda ugu badan ku bixinaysaa sidii kooxdaasi looga sifayn lahaa dalka” Sidaasi ayuu hadalkiisa raaciyey Ra’iisul Wasaaruhu.
“Xukuumaddaydu waxa ay balanqaadaysaa in ay kaalin mug leh siiso culimada si loo jebiyo fikirka qalafsan ee kooxda Al-shabab. Kaalinta culimadu waxa ay noqoneysaa mid wax ku-ool iyo laf-dhabar ah, waxayna ka qaybqaadanayaan talada dalka iyo go’aamada la gaarayo. Waxaan halkan si dhab ah uga balanqaadayaa in la furo xafiis aad ku shaqaysaan oo aad hawlihiinna ku qabsataan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Shiikh Axmed.
Dhinacooda, culimada Soomaaliyeed ee ka qaybgalay kulankan ayaa soo dhoweeyey tallaabada ay dowladda Soomaaliya ku hawlgelinayso culimada si ay uga qaybqaataan dagaalka dalka looga Alshabaab, waxana ay balan ku qaadeen in ay ka qaybqaadanayaan dagaalka lagula jiro Al-shabab, iyagoo caddeeyey in ay fikir iyo xoogba ku gacan siinayaan dowladda Soomaaliya oo ay ku tilmaameen dowlad Muslim ah oo aan hub lagala hor iman Karin.
“Culimadu waa hoggaamiyayaasha bulshada ee dhabta ah, waana dadka ugu habboon ee bulshada wax u sheegi kara ama abaabuli kara. Laga soo bilaabo halgankii xorriyada, kaalin weyn ayaan dalkan kaga jirnay, waxaan haddana diyaar u nahay inaan dagaalka galno oo safka hore tagno si aan u dhiirrigelini ciidamada xaq-u-dirirka iyo mujaahidiinta ah ee Soomaaliyeed. Waxaan diyaar u nahay inaan u tagno dhammaan qaybaha kala duwan ee cidamada qaranka ee geesiyaasha ah oo u sheegno in ay ku taagan yihiin dariiqa saxda ah” Sidaasi ayuu yiri Shiikh Nuur Baaruud Gurxan oo goobta ka hadlay.
Muungaab: Gudoomiyihii doonta ka hara mid caaboon ayaa lagu badelayaa
Puntland oo ku faraxsan abaalmarinta Mareykanku duldhigay Yaasiin Kilwe